बुधबारको राशीफल : कुन राशी हुनेहरुको समय कस्तो चल्दैछ ? हेर्नुस् – Dainik Pana
बुधबारको राशीफल : कुन राशी हुनेहरुको समय कस्तो चल्दैछ ? हेर्नुस्
आज वि.सं. २०७६ साउन १५ गते बुधबार तदनुसार ई.सं. २०१९ जुलाई ३१ तारिख । श्रावण कृष्णपक्ष (दिल्लागा) चतुर्दशी तिथी, दिउँसो १०ः५४ बजेसम्म, त्यसपछि अमावस्या तिथी, पुनर्वसु नक्षत्र, दिउँसो ०२ः४६ बजेसम्म त्यसपछि पुष्य नक्षत्र ।
दिन लाभदायक छ । नयाँ कामधन्दा वा व्यवसाय शुरु गर्ने समय छ । कामको चाप र दायित्व बढ्नेछ । अरुको जिम्मेवारी समेत बहन गर्नुपर्ला । विगतमा रोकिएका काम बन्न सक्छन् तर अरुमाथि भर पर्नु हुँदैन ।
सानातिना कुरामा अल्मलिनुहुँदैन । ठूलो आशा देखाउनेहरुले धोका दिन सक्छन् । व्यापार व्यवसायबाट मेहनतअनुसार लाभ लिन सकिनेछ । शरीरमा थकानको महसुस हुनेछ । तथापि परिवारिक सुख मान्यजनको सेवामा समय वितेको पत्तो हुँदैन । विद्यार्थीहरुले आमा र दिदीको आर्शिवादले उपलब्धि हासिल गर्ने समय छ ।
सामाजिक काममा दौडधूप हुनसक्छ । धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रबाट सम्मानित हुने अवसर पाइनेछ । व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रै लाभ प्राप्त हुनेछ । आम्दानीका नयाँ मार्ग फेला पर्नेछन् । आवश्यक परेमा अभिभावकको सल्लाह लिन सकिनेछ । स्वास्थ्यमा सकारात्मक संकेत देखिनेछ
चाहानाबमोजिम काम बन्नेछ । मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ आकर्षित हुनेछ । आत्मीयजनहरुसँग भेटघाट हुनेछ । विद्यार्थीहरुले मान्यजनको सहयोगमा महत्वपूर्ण काम गर्नेछन् । यात्राबाट लाभ हुनेछ । परिश्रम गरेअनुसार हरेक काम सम्पन्न हुनेछ ।
दिउँसोबाट आम्दानी र लाभ हुने विषयमा ध्यान जानेछ । दिन सामान्य नै छ । जोस र जाँगरको साथै संयमतापूर्वक काम गर्दा उचित लाभ प्राप्त हुनेछ । गरेका कामहरु ढिलोगरी सम्पन्न हुनेछन् ।
विभिन्न सामग्री किनमेल गर्दा महंगोमा परिएला । आर्थिक पक्ष बलियो नभए पनि केहि लाभमूलक काम बन्ने सम्भावना छ । पारिवारिक समस्या र उल्झनमा समय दिनु पनेृछ । अरुका काम र समस्यामा रुमल्लिनु हुँदैन । चेलीबेटीको काम देखेर चित्त नबुझ्न सक्छ । बोलीको विपरित अर्थ लाग्न सक्छ । यसकारण सोचेर बोल्नुहोला । खानपानमा नियन्त्रण गर्नुहोला ।
आजबाट खराब र दिक्कलाग्दो समय समाप्ति हुनेछन् । दिउँसोबा असुन्तुष्टि सकिनेछन् । रमाइलो मनोरञ्जनमा मन आकर्षित हुनेछ । अधूरा कामहरु पूर्ण हुन थाल्नेछन् । स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आउनेछ ।
आध्यात्मिक र सामाजिक काममा सक्रिय भइनेछ । वादविवादमा विजयी भइनेछ । व्यापार व्यवसायमा देखिएका समस्या समाधान हुनेछन् । परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बढ्नेछ । धेरै दिनपछि आज साझ रमझमका लागि धन र समयको जोहो हुनेछ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ । पेसा र व्यवसायबाट लाभ हुनेछ ।
दिउँसोको तुलनामा विहानको समय उत्तम छ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यमा संलग्न हुनुपर्नेछ । भित्रि ज्ञानको उदय हुनसक्छ । लक्ष्य र कर्मप्रति लगनशीलता बढ्नेछ ।
प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिनेछ । तर साँझपख गरेका काममा अवरोध आउने सम्भावना छ । दैनिक कामकाजको चाप बढ्न सक्छ । मनमा आवेग र क्रोध हाबी हुने समय छ । प्रतिशोधको भावना त्याग्नु राम्रो हुन्छ । घरायासी प्रयोजनका विषयमा खर्चवृद्धि र तनाव हुनसक्छ । श्रममूलक व्यवसायबाट लाभ प्राप्त हुनेछ । घुमघाम, परोकार र दानपुण्यमा मन आकर्षित हुनेछ ।
धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक काममा सक्रिय भइनेछ । मान्यजनको सहानुभूति र आर्शिवाद मिल्नेछ । गरेका काम सफल हुनेछन् । सम्मान र साख आर्जन गरिनेछ । कर्मप्रति समर्पित भई भाग्यबल बढाउने समय आएको छ । त्यसैले पेसा वा व्यवसायगत उन्नतिका लागि गरिएका प्रयास सफल हुनेछन् ।
चिताउँदै नचिताएको कुनै महत्वपूर्ण काम बन्नेछ । कुटुम्ब र बन्धुबान्धवबाट सुखद समाचार प्राप्त हुनेछ । देशपरदेशबाट राम्रो समाचार आउनेछ । लामो दुरीको यात्राका क्रममा वा प्रशासनिक क्षेत्रको उल्झन सुल्झाउने राम्रो समय छ । विद्यार्थीहरुले आफ्नो साख जोगाउन सक्नेछन् । अन्यले रोजगारीको क्षेत्रबाट सम्मान पाउनेछन् ।
धर्म, दर्शन र अध्यात्मतर्फ मन आकर्षित हुनेछ । व्यापार व्यवसाय र कामधन्दामा खट्ने समय छ । लामो दुरीको यात्राको लागि समय अनुकूल रहेको छ । दाम्पत्य सुख, प्रेमसम्बन्ध तथा पारिवारिक स्थितिमा सुधार आउनेछ । दीर्घकालिन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आर्थिक लगानी हुनेछ ।
आत्मविश्वास बढ्नेछ । अभिभावकको महत्वपूर्ण सल्लाह प्राप्त हुने समय छ । कर्मचारीले हाकिम खुशी पार्ने समय हो । कुनै क्रियाकलापमा प्रशंसा पाउने समय छ । प्रायः सबैको घरायासी काममा दिलचस्पी बढ्नेछ । कर्मसिद्धीको समय छ ।
बिहानै सुखद समाचार सुन्न पाइनेछ । गरेका प्रयासमा ढिलै गरी भए पनि सफलता आर्जन गर्न सकिनेछ । सानो प्रयासले अड्डा अदालत वा प्रशासनका क्षेत्रमा रोकिएका काम अघि बढ्नेछन् ।
पहिले गरेका क्रियाकलापको मूल्यांकन र प्रशंसा हुनेछ । दिउँसोबाट धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ । पारिवारिक सम्बन्धमा सुमधुरता आउनेछ । मान सम्मान र प्रशंसा प्राप्त हुनेछ । रोकिएका काम शुरु गर्ने वातावरण बन्नेछ । आर्थिक पक्षमा टेवा पुग्नेछ । मध्यान्हसम्म रिस र आवेगमाथि नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ । सवारी चलाउँदा र हातहतियारको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।
मनमा उत्साह र उमंग देखिनेछ । बौद्धिक क्षेत्रमा राम्रो छ । आँटेका काममा राम्रो उलब्धि हात पार्न सकिनेछ । दाम्पत्य जीवन वा प्रणय सम्बन्धमा राम्रो छ । तर दिउँसाबाट खराब उर्जा प्राप्त हुनेछ । संयम र सचेत हुनुहोला ।
सानातिना घरायासी समस्या देखिने भए पनि तिनले दैनिकीमा खासै फरक पार्ने देखिदैन । जीवनसाथीसँग वैचारिक मतभेद हुनसक्छ तर छिट्टै सहमति जुट्नेछ र व्यापार व्यवसाय र साझेदारीका काम मध्यान्हभन्दा अगाडि नै राम्रो देखिन्छ । आज मनमा कुबुद्धि आउन दिनुहुँदैन । तुजुक देखाउँदा ठूलो फन्दामा परिएला ।
व्यवसायमा देखिएका अप्ठ्यारा र असजिला पक्षको चिन्तनमा एकाबिहानै मन घोत्लिने सम्भावना छ । के गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयले निर्णय क्षमतामा कमी आउन स्कछ । तर आजबाट मन रमणीयतातर्फ आकर्षित हुनेछ ।
भाबुकता र काल्पनिकतामा अल्मलिएर गर्नैपर्ने काममा बिलम्ब हुनसक्छ । त्यतिकै पन िआज मन भावुक र रोमान्टिक बन्नसक्छ । जीवन साथी वा प्रेमी/प्रेमीकालाई समय दिनु राम्रो हुन्छ नत्र चिसोपना बढ्न सक्छ । व्यापार व्यवसाय सामान्य नै रहेको छ । अरुले साथ देलान् भन्ने आशा त्यागेर कर्मशील हुनु राम्रो हुन्छ । कुनै काममा दुविधा भएमा जीवनसाथी वा विपरित लिङ्गी साथीको सहयोग लिँदा राम्रो हुन्छ ।
मिश्रित परिणाम भएको समय छ । दिनको शुरुवात ज्ञानज्ञुन र बौद्धिक क्षेत्रमा मन आकर्षित भए पनि दिउँसोबाट मानसिक चिन्ता र छटपटीले व्याकुल हुन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धी र कुरा काट्नेले तपाईका विरुद्धमा प्रचारबाजी गर्न सक्छन् ।
घरमा आमा वा दिदीको स्वास्थ्य प्रतिकूल बन्न सक्छ । काम गर्दा आर्थिक, सामाजिक, व्यावहारिक आदि विभिन्न समस्या आउन सक्छन् । झिनामसिना र सानातिना कामका लागि निकै खट्नुपर्ला । कुनै झैँझगडा विवाद वा तर्कविर्तकमा सरिक हुनुपर्ला । मुद्दामामिला, झगडा र विवादबाट सकेसम्म टाढै बस्नुहोला । निर्णय क्षमताम कमी आउनेछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला । मौसमी रोगको प्रकोप देखा पर्न सक्छ ।
आज केहि महत्वपूर्ण घरायासी काममा समय बित्नेछ । जसले गर्दा भविष्यमा राम्रो फाइदा लिन सकिनेछ । सानातिना घरायासी काममा दौडधूप गर्नुपर्ने भएकोले शुरुमा खिन्नता बढ्नेछ तर दिन त्यति राम्रो छैन ।
गरेको प्रयासबाट सार्थक फल प्राप्त हुनेछ । दिउँसोबाट ज्ञानज्ञुन र दर्शनका क्षेत्रमा मन जानेछ । कल्पना र भावुकतालाई व्यवहारमा उर्तान आजको समय राम्रो छ । डुबेको धन अप्रत्यासित रुपमा फिर्ता आउन सक्छ । आत्मबल र निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुने भएकाले सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नेछ ।
कृष्ण हात जोडेर नेपाल फर्किए ! (फोटोहरु)
Posted on September 17, 2019 Author Dainik Pana
कृष्ण ओलीले आफ्नो कृतिम हात जोडेर नेपाल फर्किएका छन् ! रुपा र कृष्ण केहि दिनअघि नेपाल फर्किएका हुन् ! कृष्ण ओलीका दुवै हात जोडिएका छन् । कृष्णले आफ्नो दाँया हातमा अटोबकको ‘बि बायोनिक ह्याण्ड’ जोडेका छन् । चेम्बुरको बिकास सेन्टरमा रहेको अटोबक हेल्थकेयरमा कृष्णका हात जोडिएका हुन् । यो हेल्थकेयर मुम्बईमा रहेको छ । जर्मनीको […]
रुपा र कृष्ण मुम्बईमा : कृष्णको हात हाल्दै
Posted on July 24, 2019 July 24, 2019 Author Dainik Pana
कृष्ण ओलीको दुवै हात हाल्न मुम्बईमा छन् । उनीहरु गत सुक्रबार मुम्बई पुगेका थिए, कृष्णको हात हाल्न कति दिन लाग्छ भन्ने बारे अझै थाहा भएको छैन । कृष्णको हात जोड्ने प्रक्रिया थालिएको छ । खुट्टा जोडिसकेका कृष्णको अब हात पनि चांडै हाल्ने भएको छ। कृष्णले हात हाल्ने भएपछी रुपा मगर ओली निकै उत्साहित देखिन्छिन। कृष्णको […]
ज्योतिषि डिपि भण्डारी वि.सं.२०७६ साल साउन ११ गते । शनिबार । ईश्वी सन् २०१९ जुलाई २७ तारिख । नेपाल संवत् ११३९ । परिधावी संवत्सर । दक्षिणायन । वर्षा ऋतु । श्रीशाके १९४१ । श्रावण कृष्णपक्ष । तिथि दशमी,२५ घडी ०९ पला ,दिउसो ०३ बजेर २८ मिनेट उप्रान्त एकादशी । नक्षत्र कृतिका,२७ घडी ४० पला,बेलुकी ०४ […]
बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै गाडीमा आगजनी